Izindaba - Umehluko Phakathi Kokuvunda Okushiselwe Ipayipi kanye ne Straight Welded Pipe
Umehluko Phakathi Kuvunguza ashiselwe Pipe futhi Straight ashiselwe Pipe
Umehluko omkhulu phakathi kwamapayipi amabili ashiselwe wepayipi evikelekile evikelekile nepayipi eliqondile elibunjiwe umehluko ngohlobo lokushisela.
Kuvunguza ipayipi eliphothene liyisakhiwo esiphansi sekhabhoni yensimbi noma umugqa wensimbi ophansi ogoqwe kubhubhu elingenalutho nge-helix angle ethile (ebizwa nangokuthi i-angle angle), bese ishiselwe futhi yenziwa ipayipi elihlangene, elingasebenzisa umucu omncane Ukwenziwa kwensimbi kwamapayipi wensimbi amakhulu ububanzi. Amapayipi ashiselwe ngumoya ikakhulukazi amapayipi afakwe i-arc ashiselwe ngaphakathi (SSAW), asetshenziswa kakhulu ekwakhiweni kwamapayipi egesi ahlukahlukene eChina. Ukucaciswa kwayo kuvezwa "ubukhulu bangaphandle * bokudonga kodonga". Amapayipi ashiselwe okomoya anezinhlangothi ezimbili ashiselwe futhi anezinhlangothi ezimbili. Ipayipi eline-welding lizoqinisekisa ukuthi ukuhlolwa kwe-hydraulic namandla we-tensile nokusebenza okugoqa okubandayo kwe-weld kuyahambisana nemithetho.
Iqonde umthungo ashiselwe ipayipi kuyinto ephezulu kakhulu imvamisa zamanje kanye nomphumela wokusondela isinyathelo okuzokwenziwa elakhiwe ungqimba solder ngaphambi Welding kwakhiwa umshini udini, futhi onqenqemeni tube elingenalutho is ukufuthelana ancibilike, futhi tho ngaphansi kwamandla athile ngokucindezela, ukupholisa ukubumba. Ipayipi elishisayo le-high-frequency seam eqondile lisetshenziswa lapho onqenqemeni lwamapayipi angenalutho ancibilikiswa yi-high-frequency current (i-ERW), ebizwa ngepayipi elicwilisiwe le-arc welded pipe (LSAW) ngokuncibilika nge-arc kagesi.
Amandla wepayipi evikelekile evundile ngokuvamile ephakeme kunaleyo yepayipi eliqondile elishiselwe. Inqubo enkulu yokukhiqiza ukucwiliswa kwe-arc egxilile. Ipayipi le-welding le-spiral lingaveza amapayipi ashiselwe ngamaphayiphu ahlukile wepayipi ngobubanzi obufanayo bezikhala, futhi angakhipha namapayipi ashiselwe ngobubanzi obukhulu ngezikhala ezincane.
Inqubo yokukhiqizwa kwephayiphu eqondile ye-seam welding ilula, ikakhulukazi kunqubo yokukhiqiza, ehlukaniswe ngamapayipi aphezulu ashiselwe umphetho oqondile we-welded kanye ne-arc ecwilisiwe ehlanganiswe ipayipi elinezinsimbi eziqondile. Ipayipi eliqondile le-seam welding linokukhiqiza okuphezulu, izindleko eziphansi kanye nentuthuko esheshayo.
Kodwa-ke, uma kuqhathaniswa nepayipi eliqondile elishiselwe ipayipi lobude obufanayo, ubude be-weld bukhuphuka ngama-30 kuye kwayi-100, futhi isivinini sokukhiqiza siphansi. Ngakho-ke, amapayipi amancane ashiselwe aphakathi nendawo aqonde ngqo nge-seam ashiselwe, ngenkathi amapayipi amakhulu ashiselwe ngobubanzi ikakhulukazi ashiselwe nge-welding.